सडक फराकिलो तर यात्रा डर लाग्दो। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
सडक फराकिलो तर यात्रा डर लाग्दो।
रेडियो झापा 100.7 MHz. मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ ८:५३:३६
मोनित महर्जन, २१ मंसिर ,दमक, कुनै पनि शहर या राष्ट्र सम्बृद बन्नको लागि सडक सुबिधा एउटा मुख्य आधार हो। हालका दिनहरुमा नेपालमा सडक बिस्तारको क्रम धेरै बिकसित हुदै गईरहेको अवस्था छ। शहर भित्रका सडक फराकिलो बनाउने देखि लिएर सडक बिस्तारको विभिन्न नयाँ योजनाहरु आउने र नेपालका दुर दराज सम्म सडक विस्तार हुने क्रम तिब्र छन्। अहिले नेपालका धेरै दुर्गम स्थान सम्म सडक मार्गको पहुँच रहेको छ जसले पक्कै पनि जनता र देश बिकासको लागि निकै ठुलो भूमिका खेल्ने गरेको छ । सडक बिस्तारको क्रममा हाल धेरै ठुला र महत्वकांक्षी योजनाहरु चलिरहेका छन्। त्यसको उदाहरण नागढुंगा नौबिसे शुरुंग मार्ग देखि काठमाडौँ र मधेश जोडने द्रुत गति मार्ग सम्मलाई लिन सकिन्छ।
कोरोनको महामारीको कारण सबै जसो क्षेत्र प्रभावित रहे। सबै काम प्राय जसो ठप्प नै भए। तर त्यहि समयमा नेपालका धेरै ठाउ या शहरहरुमा सडक विस्तारले तिब्र गति लियो। लकडाउन एउटा अवसर जस्तै रह्यो सडक तथा यातायात विभागको लागि, हुन त सडक बिस्तारको लागि दैनिक भिड लाग्ने यातायातका साधनहरु काम चुस्त र छरिटो रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि ठुलो बाधक हुने गर्दछ। लकडाउनले त्यो बाधा हटाउन सहज गरिदिएको थियो। त्यहि मौका पारि सडक विभागले काठमाडौँ लगायत देशका धेरै सहरहरुमा सडक विस्तार गर्ने काम गर्यो। हाल ति शहरहरुमा सडकहरु निकै फराकिलो भएका छन। लकडाउनकै मौका छोपी झापा जिल्लाको शहर दमकमा पनि यो कार्यले निरन्तरता पायो। दमकको मुख्य चोक गनतन्त्र चोक देखि बरगाछी सम्म सडक चौडा गर्नुको साथै ब्यबस्थित गर्ने काम सडक बिभागले गर्यो। हाल सो सडक खण्ड निकै फराकिलो भएको छ। तर त्यति नै अब्यबस्थित पनि। सडक बिस्तार संगै सो सडक खण्डमा यातायात साधन तथा पैदल यात्रीको लागि जोखिम पूर्ण भएको छ।
सडक विस्तार त भयो तर सो संगै ट्राफिक ब्यबस्थापन चुस्त नहुदाँ यात्रामा जोखिम बढेको हो। सडक बिभाग र ट्राफिक ब्यबस्थापनको समन्वय नभएको प्रस्ट महसुस गर्न सकिन्छ । सो सडक खण्डमा गणतन्त्र चोक देखि बरगाछी चोक सम्म पुग्दा १० को हाराहारीमा भित्रि सडकहरु जोडिने गर्छ। पुर्व पच्छिम राजमार्ग भएको कारणले पनि दैनिक सयौं सवारी साधनको चाप सो सडकमा रहेने गर्दछ। शहरको मध्य भागमा रहेको कारण पनि सहायक सडकहरुबाट पनि यातायातका साधनको आवत जावत निकै बाक्लै हुने गरेको छ। हाल सो सडक खण्ड ४ लेनको रहेको छ। सडक स्तर उन्नतिसंगै सो सडकमा चल्ने सवारी साधनहरुको लागि यात्रा सहज भएको छ। सडक विभागले लेन बिभाजन गर्न सडक को दायाँ बायाँ १ १ लेन छुटाएर सिम्नेटेट दिभाईडर प्रयोग गरेको छ। तर अव्यवहारिक र अबैज्ञानिक ढंगबाट राखिएको सो डिभाईडरले दुर्घटनाको झनै जोखिम बढाएको देखिन्छ। अझ जोखिम सडकको दायाँ बायाँको सो जोखिम बढी देखिन्छ। सो लेनमा चल्ने यातायातका साधनहरुले कुनै पनि ट्राफिक नियम पालना गरेको पाईदैन। सडक प्रोयोग गर्दा नियम अनुसार बायाँ लेन तर्फबाट प्रोयोग गर्न पर्ने हो तर सडकको दायाँ बायाँ लेनमा भने दोहोरो आवत जावत गर्ने गरिएको पाइन्छ। जसले गर्दा सडक दुर्घटना जोखिमको खतरा उच्च रहेको छ। तर सम्बन्धित निकायबाट भने यो कुरामा ध्यान दिईएको पाइएन ।
हाल यो सडक खण्डमा सडक दुर्घटनाको संख्या पनि सडक विस्तार हुनु अगाडी भन्दा बढिरहेको तत्थ्याङ्कले देखाउछ। सडक विस्तारसंगै सडक नियम उलंघन र उच्च गतिका साथै जथाभावी सडकको प्रयोगको कारणले दुर्घटना बढिरहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।
समयमै ट्राफिक व्यवस्था दुरुस्त गर्न नसक्दा आगामी दिनमा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरु नबढ्ला भन्न सकिन्न। सो कुरालाई सरोकारवाला तथा सम्बन्धित निकाएले बेलैमा ध्यान पुराउन जरुरि छ।